Taariikhda Aluminium, Daaqadda Aluminium Kiiska - Fenan
Waxaan si adag ugu ballan qaadaynaa inaan ahay alaab soo saare aluminium
Waxaa la aasaasay sanadkii 1988, Fujian Fenan Group hadda waa shirkad balaaran oo balaaran, oo ku takhasustay soosaarka nidaamka daaqadda aluminiumka, tuubooyinka birta ee birta ah iyo qiimeynta darbiga daahyada. Ka dhex jira soosaarayaasha Soosaarayaasha Profile Aluminium 5-ta Shiinaha, Kooxda Fenan waxay dabooshaa aag ah
1,332,000 mitir murabac, dhisme 4 saldhig wax soo saar (Fujian Fenan Aluminum Warshadaha Magaalada, Henan Fenan Aluminum Warshadaha Magaalada, Fenan Window Nidaamka Warshadaha Warshadaha iyo Fujian Fenan steel Production base) Saldhigga Fenan Group wuxuu aasaasay Fujian Fenan Smart W&D system Co Ltd ee 20 14 illaa in la horumariyo oo laga shaqeeyo nidaamka daaqadda & albaabka Fenan, oo la dhiso O2O-kii ugu horreeyay ee dukaannada khadka tooska ah ee ku yaal warshadaha-fenan E-shop
Albaabka isku laabma Aluminiinka Waxaa ogolaaday NAMI iyo heerka AAMA. Waxaan xubin ka nahay Ururka Soosaarayaasha Soo-saareyaasha Mareykanka waxaanan dammaanad ka qaadnaa 10 sano oo dammaanad qaad ah. Daaweynta dusha sare ee daaha leh budada waxay muujineysaa qaabka xarrago leh oo muuqaal ah. Qalabka guga-dhejiska la sudho iyo nidaamka saxanka kubbadda leh ee kubbadda sareeya ayaa kor u qaadda qiiqa iyo hawlgalka xasilloonida iyo nolosha adeegga oo la dheereeyo. Naqshadeynta farshaxanka leh ee xijaabashada iyo rubebr waxay kaa horjoogsaneysaa inaad gacmaha isku qabato taas oo aad ammaan u ah.
Hoolka bandhigga 'FOEN' wuxuu muujinayaa adeegyo fara badan oo alaabooyin ah kuwaas oo horumariyay si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisha meelo kala duwan oo juqraafi ahaan iyo qaababka qurxinta. waxaan diirada saareynaa albaabada amaanka ee dhamaadka sare iyo Windows. Oo lagu qalabeeyay shaqo quful caqli gal ah si loo helo nabadgelyo weyn. Iyada oo leh awood farsamo oo xoog leh, tikniyoolajiyad horumarsan oo sifiican loo qalabeysan yahay, cabiraad dhameystiran oo alaabo ah, oo ay ku jiraan Bi-laabyo iyo daaqado, Albaabbo laalaadayo, daaqado alwaax iyo alwaaxyo, Aluminium iyo Glass Louvres, Deedka barkadda, iwm.
Fujian Foen Aluminum co. Ltd waxaa la aasaasay 1988, oo ku yaal magaalada Fuzhou ee Shiinaha, waxay dabooshaa aag dhan 1,333,000 mitir murabac ah oo ay ka badan yihiin 3500 shaqaale. Waxaan nahay soo-saare xirfad-yaqaan gudaha Shiinaha oo soo saaraysa astaamaha aluminiumka, daaqadda aluminiumka iyo nidaamka albaabka, darbiga daahyada iyo qoryaha qoraxda.
Noocyada daaqadaha midabada Alodium Pr ...
U Chanel Tube waxaa sameeyay Aluminium warshadaha
Profileural Aluminum Profile with leh dusha sare
1.25 Aluminium Tube Loogu Talagalay
Astaanta Aluminiumka Nidaamka Daaqada iyo daahyada ...
Hadaad ubaahantahay xalka warshadaha ... Adiga ayaa diyaar kuu ah
Waxaan ku bixinnaa xalal hal abuur leh horumar waara. Kooxdayada xirfadda leh waxay ka shaqeeyaan inay kordhiyaan waxsoosaarka iyo saameynta qiimaha suuqa